Gudoomiyaha XDSHSI Oo Kahadlay Arrimaha Doorashooyinka. - Cakaara News
Gudoomiyaha XDSHSI Oo Kahadlay Arrimaha Doorashooyinka.
Jigjiga(CN) Jimce.Dec.26.2014, gudoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Shacbiga Soomaalida Itoobiya (XDSHSI) mudane Maxamed Rashiid Isaaq ayaa sheegay in uu xisbigu isbadal iyo guulo wax ku'ool ah uu kasoo hoyiyay deegaanka shantii sano ee u danbaysay.
Gudoomiyaha XDSHSI ahna afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq waxaa kawar bixiyay wax qabadka xisbiga ee sanadadii u danbaysay gaar ahaan dhinacyada horumarka ee biyaha, waxbarashada, kaabayaasha dhaqaalaha, caafimaadka, waxsoosaarka iyo xidhiidhka dadwaynaha ee gudaha iyo dibadada oo guulo taariikhi ah laga gaadhay.
Mudane Maxamed Rashiid ayaa sheegay in ay doorashadan shanaad ee dalka guud ahaan iyo tan deegaankaba ay si habsami iyo dimuqraadiba ah loo diyaar garoobay. Gudoomiyuhu waxaa uu carabka kudhuftay in XDSHSI uu yahay xisbi aragti shacab leh islamarkaana uu kalsooni iyo taageero badan kahaysto shacabka.
Gudoomiyuhu waxaa uu intaas kudaray in waxqabadka xisbiga iyo guulaha uu sameeyay ay shacabku marag kayihiin islamarkaana uu xisbigani yahay mid ruuxda iyo rabitaanka shacab ku aas aasan. Waxqabadkii hore kasakow waxaa shacabka u muuqda istaraatijiyada horumarineed ee uu xisbigani qorshaystay iyo yoolasha dhaadheer.